WTTC: North America contributes 25% to global Travel & Tourism GDP | eTurboNews | Dị | Njem Akụkọ Banyere Na ntanetị
The World Travel & Tourism Council (WTTC), nke na-anọchite anya ndị ọrụ njem njem njem njem njem njem na njem zuru ụwa ọnụ, taa wepụtara Akụkọ Obodo ya zuru oke maka 2019, nke gosipụtara North America na-enye $ 686.6 ijeri (25%) na Global Travel & Tourism GDP.
Na-elekwasị anya na isi obodo ndị njem njem 73, akụkọ ahụ na-enye atụmatụ nke GDP na ọrụ nke ngalaba Travel & Tourism na-eweta, na-egosipụtakwa atumatu ndị na-aga nke ọma, atumatu na atumatu emejuputara.
Nkwupụta ahụ na-ekpughe ọtụtụ obodo gafee North America na-enye nnukwu onyinye na GDP n'ozuzu obodo ahụ, yana mpaghara njem na njem nlegharị anya nke Cancun na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (46.8%), na Las Vegas na-enyekwa ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ (27.4%).
N'ime obodo iri kachasị elu na ụdị a, Las Vegas na-esochi Orlando, nke na-enye aka na 10% na GDP n'ozuzu obodo.
Nkwupụta obodo ahụ na-egosi obodo 73 ndị a maka $ 691 ijeri na Direct Travel & Tourism GDP, nke na-anọchite 25% nke GDP zuru ụwa ọnụ nke mpaghara ahụ na ihe karịrị nde 17 ọrụ. Na mgbakwunye, na 2018, Direct Travel & Tourism GDP gafere obodo niile, toro site na 3.6%, karịa uto akụ na ụba obodo nke 3.0%. Obodo 10 kachasị elu maka onyinye njem na njem nlegharị anya na obodo GDP gụnyere Orlando ($ 26.3), New York ($ 26) na Mexico City ($ 24.6 billion).
Nkwụnye ego ndị ọbịa na mba ụwa na-adịkarị mkpa karịa obodo ọ bụla. Abụọ n'ime obodo iri kachasị maka mmefu ndị ọbịa mba ụwa nọ na North America, ndị ọbịa mba ofesi na New York na-emefu $ 10BN na ndị nke Miami na-etinye $ 21 ijeri.
Mmepe akụrụngwa na nhazi nke njem abụrụla isi ihe na - eme njem na njem. Ego ha ga-enweta site na ndị ọbịa mba ụwa ga-akwụ ụgwọ maka ọrụ akụrụngwa obodo n'oge ụfọdụ, ịnye ndị ọrụ ọhaneze na ọrụ ga-eme ka ndụ ndị bi na ya ka mma. Iji maa atụ, ndị ọbịa mba ofesi nọrọ na New York n’afọ gara aga bụ ugboro 3.8 karịa ụgwọ NYPD, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke mmefu ego maka ụlọ akwụkwọ obodo.
O doro anya, obodo anọ n'ime obodo iri kachasị maka mmefu ndị ọbịa n'ụlọ nọ na mpaghara ahụ, yana Orlando na-ewere ọnọdụ nke atọ na $ 10 na Las Vegas na nke isii na $ 40.7. Nọdụ n'ọnọdụ nke asatọ, mmefu ụlọ na New York ruru $ 29.3, ebe na Mexico City kụrụ ijeri $ 25.3.
Otú ọ dị, mgbe ị na-atụle mmefu ụlọ site na pasent, njem nlegharị anya ụlọ na Chicago na-anọchite òkè kasịnụ nke obodo ndị dị na North America nyochaa na akụkọ ahụ na 88.3%, Mexico City na-esote ya na 87.2%.
Enwere ike igosipụta obodo nwere ntụkwasị obi na mkpa ụlọ ma ọ bụ nke mba ọzọ na nsogbu akụ na ụba na nke geopolitical. Iji maa atụ, nnukwu obodo ndị na-adabere n'ọchịchọ ụlọ nwere ike bute mgbanwe na akụnụba ụlọ. N'aka nke ọzọ, obodo ndị na-adabere na mkpa mba ụwa na / ma ọ bụ ahịa ndị nwere isi iyi nwere ike bụrụ ndị nwere nsogbu na mpụga. Nkwupụta ahụ gosipụtara ọtụtụ obodo nke gosipụtara nkewa dị n'etiti ụlọ na mba ụwa, nke a gụnyere obodo abụọ dị na North America: San Francisco na New York. N'ụzọ dị iche, obodo ndị dị na North America dị ka Orlando na Las Vegas nwere nkewa gbagọrọ agbagọ, yana ihe karịrị 85% nke mmefu sitere n'aka ndị ọbịa ụlọ n'obodo abụọ ahụ.
Foto zuru ụwa ọnụ
Ihe karịrị ọkara (55%) nke ndị bi n'ụwa bi n'obodo mepere emepe - nke a bụ maka ịrị elu na 68% n'ime afọ 30 sochirinụ - obodo aghọwo ogige maka uto akụ na ụba ụwa na ihe ọhụrụ, ma na-adọta ọtụtụ ndị chọrọ bie zua ahia.
Nkwupụta ahụ na-ekpughe obodo 73 ndị a maka $ 691 ijeri na Direct Travel & Tourism GDP, nke na-anọchite 25% nke GDP zuru ụwa ọnụ nke ngalaba ahụ ma na-ede ihe karịrị nde 17 ọrụ. Na mgbakwunye, na 2018, Direct Travel & Tourism GDP gafere obodo niile, toro site na 3.6%, karịa uto akụ na ụba obodo nke 3.0%. Obodo 10 kachasị elu maka ntinye njem njem njem na njem nlegharị anya na 2018 na-enye ndị nnọchi anya mpaghara dị iche iche, obodo ndị dị ka Shanghai, Paris, na Orlando niile nọ n'elu ise.
WTTC President & CEO, Gloria Guevara kwuru, sị:
“Obodo ndị dị n’Ebe Ugwu America nke gosipụtara n’akụkọ a bụcha ndị nnọchi anya mpaghara ahụ, yana obodo ndị mepere emepe gafee US, Mexico na Canada na-egosi oke mkpa mpaghara ngalaba njem na njem na-aga na mpaghara ma na-enyekwa ihe atụ ndị ọzọ na mpaghara dịka omume kacha mma maka ịkwado uto, nkwụsi ike na nlekọta ụlọ. ”
“Inweta mmepe na-adigide na obodo chọrọ iru ihe karịrị ngalaba ahụ n’onwe ya, ma banye n’usoro sara mbara nke obodo ukwu. Iji mee ka ọnọdụ akụ na ụba pụta nke nwere ike ịtụgharị n'ụzọ na-enweghị isi na uru mmekọrịta mmadụ na ibe ya, obodo ga-enwerịrị ndị niile metụtara ya, n'ofe ụlọ ọrụ ọha na eze na nke onwe, iji guzobe obodo ndị ga-eme n'ọdịnihu. "